Kusangana neiyo Yeroto Kurota: 5 Unofanira-Shanyira Nyika | Save A Train
musha > Kufamba Iceland > Kusangana neiyo Yeroto Kurota: 5 Unofanira-Shanyira Nyika
Europe ndiyo inotungamira kondinendi maererano neyakagwinya, inogarwa, nemaguta emazuva ano akazadzwa nekunakidzwa. Kune kuwanda kwezvishamiso zvekuvaka, mamiziyamu, uye maresitorendi munyika dzese dzeEurope iwe waungafunga nezvazvo. Hupenyu hwehusiku uye zviitiko zvekudya mukondinendi iyi zvinouya zvechipiri kune zvisina. Mhuka dzesango uye zvinokwezva zvisikwa mukondinendi zvese zvinonakidza uye zviri nyore kuwana. Uye nekuda kweiyo EU chinhu uye nemhando yepamusoro yemigwagwa network kutenderera kondinendi, zviri nyore kuti vafambi vemumigwagwa vaongorore kondinendi yese nekutsvaira kumwe chete. Kuti uwane kurota kweEuropean iwe unogona kushandisa yekurenda mota kana yeruzhinji chifambiso.
Unoda IDP here (License Yenyika Dzese Dzinotyaira) Kutyaira muEurope?
tsime, dzimwe nyika dzakadai seItari dzinoda vatyairi vekunze kuti vave ne rezinesi rekutyaira pasirese seuchapupu hwekugona kutyaira. Izvo zvakanaka kuunza rezinesi kunyangwe munyika dzisiri kuida nekuti iwe ungangoda kuti ugutsikane vemuno vevanobhadhara mota nemapurisa emumigwagwa kuti iwe uri mutyairi akanaka. wo, vasati vaenda, tarisa neCDC kuti uone kuti nzvimbo dzatinokurukura pano hadzina kukanganiswa zvakanyanya nedenda iri. Uchifunga, heino runyorwa rwe 5 unofanirwa-kushanyira nyika muEurope.
1. Santorini, Girisi
Vanhu vanga vaenda kuSantorini vanotenda kuti guta iri inzvimbo ine rudo muEurope chete asi pasirese. Izvo zvakakwana kune vachangochata vachitsvaga a honeymoon kuenda. Iwe unozofadzwa neinoshamisa macaldera maonero uye kuvira kwezuva. Unogona kukwira, enda kunzvimbo dzezvikepe, kana kuva nemanheru akasununguka pamhenderekedzo dzeguta dema dzinoputika. Kana iwe uchida bhodhoro, iwe uchada sampling omunharaunda waini pamwe chete ne Mediterranean. Santorini ari alsaka kumba kune mamwe emahotera emhando yepamusoro kuGreece.
2. Chiitiko cheiyo yeEuropean Kurota: Lake Como, Itari
Gungwa reComo rinozivikanwa nekuda kwaro kusingaperi kwemisha yakanaka nemisha, chikafu chinonaka (ndiwe here iwe, Pizza yeItari?), uye inoshamisa mafoto nzvimbo, zvese izvi zvakabatana nemasevhisi ezuva nezuva. Kana iwe uine iyo nguva uye mamwe madhora ekuti usiye, unogona kuhaya chikepe chemotokari uye kuchovha kuenda kudhorobha diki reBelgio. Mune dzimwe nzira, iwe unogona zvakare kufamba kana shandisa bhasikoro rine magetsi uye unakirwe nemaonero akanaka wega. Mamiriro ekunze pano anoshamisa gore rese uye nekuda kwenzvimbo yakasarudzika tsika (hakuna vashanyi vakawanda), iwe unowana iwo mukana wakakwana wekutsemuka kubva pakushanda uye mamhepo ehupenyu hwako chaihwo. Lake Como zvakare ine chaiyo yekudanana vibe yekuchata.
Florence kuComo Nechitima
Milan kuComo Nechitima
Turin kuComo Nechitima
Genoa kuComo Nechitima
3. Reykjavik, Aisirendi
Guta guru reIceland reReykjavik nderimwe remaguta akanakisa eEurope kune vafambi, nezvikonzero zvakawanda. Kana iwe uchifadzwa nenhoroondo, iwe uchada Reykjavik kune ayo akanaka uye akapfuma mamiziyamu pakati pavo iyo Viking Maritime Museum, iyo Einar Jonsson Museum, uye iyo Museum Museum. Guta guru rakapoteredzwa nezvinhu zvinoshamisa zvinonakidza, ichiita iro rakanakisa kupinda chiteshi chevashanyi vekunze. Iwe uchaona uye nekuona matani ezve geological zvishamiso kusanganisira marara mapoinzi, mapopoma, uye Blue Lagoon. Matombo, mazitombo echando, jecha mahombekombe, uye makomo anoputika zvakare anotsanangura nzvimbo dzeReykjavik.
Nezve mabwe anokosha, iwe uchada kuravira huwandu hwakawanda hwechinyakare zvekuIcelandic chikafu munzvimbo dzakaita seSushi Samba neBaejarins Beztu Pylsur. Kana iwe uchida mhuka dzemusango, iwe unogona kuenda whale kutarisa kuchiteshi chekare cheReykjavik, kumba kusvika pamusoro 20 dzakasiyana whale marudzi. Iwe unogona zvakare kuona ma dolphin, maputi, uye porpoises, pakati pemamwe mhuka dzesango.
4. Kusangana neiyo Yeroto Kurota: Prague, Czech Republic
Vazhinji vashanyi vanoda Prague yezviitiko zvayo zvinoshamisa, kubva kumafaro ezororo kusvika kumagaro ezuva nezuva-kusvika-gore. Zvimwe zvezviitiko zvakazadzwa nemufaro zvaunofanira kuita kana uri muPrague zvinosanganisira Bohemian Carnevale paunoshanyira guta muna Kukadzi., kana iyo Mutambo weCzech Beer pakushanyira muna Chivabvu. Hupenyu hwehusiku pano zvakare chikonzero chikuru nei vanhu vachishanyira, nemaJazz makirabhu uye nezvimwe mhenyu mumhanzi kutonga nzvimbo yevaraidzo. Iyo yegore Prague Spring International Music Mutambo ndeimwe yePrague varaidzo inoratidzira. Unogona kupembera husiku hwese nekuda kwekuchengetedzeka kwakakomberedza guta. Kana iwe uchida hunyanzvi uye nhoroondo, kushanya kuMucha Museum kana iyo Kafka Museum ichakuitira hunyengeri.
5. Chiitiko cheEuropean Chiitiko: Paris, Furanzi
Matani enzvimbo dzinozivikanwa, mikana isingaperi yekutenga, chikafu chakasiyana siyana chinonaka, akapfuma munhoroondo, uye hunyanzvi kuunganidzwa, pamwe nemapaki epasi rese uye mapindu anoita kuti Paris ibude pachena kubva muboka revanhu. Zvimwe zvezviratidzo zvaunoda kuti uone kamwe chete muhupenyu hwako zvinosanganisira Iyo Eiffel Tower, Sacred Mwoyo Basilica, Arc De Triomphe, Iyo Louvre Museum, uye The Palais Garnier. Kana iwe uri anofarira zvekutengesa, iwe uchada kukwiza mapendekete neepamusoro-magumo eParis mafashoni kuRue Du Commerce, Boulevard Saint Germain, uye humwe hwomutambarakede kunotenga migwagwa. Uye kana iwe uchida hunyanzvi, kune akasiyana eounyanzvi kuunganidzwa kutenderedza Paris kuenzanisa, kusanganisira Musee dOrsay, Musee National Picasso, uye Musee du Quai Branly.
Europe haina kumbopfupikiswa ne "mabhaketi ezvinyorwa" maguta nemataundi evashanyi. Izvo zvese zvinoenderana nebhajeti rako, nguva, uye chinangwa chekushanya. Iyi runyorwa inongovhura chete magedhi kuti iwe uone dzakanyanya kufadza nzvimbo mukondinendi.
pano pa Save A Train, tichafara kubatsira kuronga rwendo kuenda ku 5 Nyika Dzinotyisa MuEurope. A chitima rwendo mhiri Europe rakanakira kufamba nechitima.
Iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "Iyo yeEuropean Kurota: 5 Unofanira-Shanyira Nyika Dziri kuEurope ”kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperiencing-european-dream-must-visit-countries%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
kurota usarotchi EuropeanDream MustVisitCountriesInEurope TravelbyCar travelbytrain TravelCzechRepublic travelfrance travelitaly
Emma ari kushanda sachipangamazano nemakambani anobva kunyika dzakasiyana. Basa rake rinoda kufamba kazhinji kuti usangane nevavanoshanda navo, sekufamba ndiko kufarira kwake kunoita kuti basa rake rive rakakwana. Iye zvakare anofarira kunyora nguva nenguva kazhinji nyaya dzine chekuita nekufamba, asiwo hutano uye mararamiro. - Unogona baya pano Bata Rebecca